Sunday January 07, 2018 - 12:25:51 in Wararka by
Wasiir horay uga tirsanaa dowladda Federaalka islamarkaana kamid ah xildhibaanadda Baarlamaanka ee ay isku siyaasadda yihiin Madaxweyne Farmaajo ayaa shaaciyay in Soomaaliya ay tahay dal shisheeye heysto.
Cabdi Raxmaan Goodax Barre oo horay usoo noqday wasiirka arrimaha gudaha ayaa wareysi uu bixiyay ku sheegay in kumanaan ciidamo shisheeye ah oo aan Villa Somalia ka amar qaadan ay dalka ku suganyihiin.
Wuxuu carrabaabay in ciidamo ay mushaarkooda bixiyaan dowladaha Mareykanka,ingiriiska, Turkiga iyo Imaaratka Carabta oo lagu tababaray Muqdisho iyo duleedkeeda islamarkaana ay fuliyaan falal gurrucan oo shisheeye gadaal kasoo riixayo.
Sidoo kale Xildhibaan Goodax ayaa soo hadal qaaday in dowladda Federaalka aysan hoos tagin ciidamo ka socda dowaldaha Ingiriiska Mareykanka iyo Itoobiya oo soomaaliya dhinac ka jooga iyo sidoo kale ciidamo calooshood u shaqeystayaal ajaanib ah oo uu sheegay in ay dalka soo geliyeen shirkado ajaanib ah sida Bangaraaf dhammaantoodna ay ku marmarsiyoonayaan ladagaallanka Argagaxisada.
Warkan kasoo yeeray wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ayaa yimid maalmo kadib markii maleeshiyaad ay dowladda Imaaraatka carabtu tababartay ay weerareen guriga Cabdi Qeybdiid.
Halkan ka degso Caddeymaha Goodax Barre ama hoos ka daawo
Al Shabaab Oo Gaalkacyo ku dilay mid kamida Golaha deegaanka 'Puntland'.
Ciidamo Boolis ah oo lagu dilay degmada Hodon ee Muqdisho.